सोचाइमा पहिरो जान्छ :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
सोचाइमा पहिरो जान्छ अतृप्त पाण्डेय
शून्य, चिहानजस्तै छ कोठा । कोठामा कोही छैन । म छु । मौनता छ मेरो साथ । तर पनि सुन्दैछु सडकमा अझै कोही गुगुनाइरहेको छ…..नसक्ता पनि म तिमीमा नि फुल्न । नसक्ने भए छु तिमीलाई भुल्न ……….. यस्तै-यस्तै सस्ता भावुक शब्दहरुकै साथ लागेर झ्यालको बाटो गरेर कोठाभित्र पस्छ बतास, एउटा चिसो बतास ……. फलस्वरुप चलमलाउँछन् क्यालेण्डरका मौन छायाँहरु । लौ, आज पनि अरु थोक केही नपाएको झोकमा मलाई मात्र भएपनि छोएर मदेखि चिप्लिदै जान बिर्सेन, साँच्चै बिर्सिँदै बिर्सिएन चिसो बतासले …………..साँच्चै, मदेखि प्रतिदिन चिप्लिदै गएको, चिप्लिदै जाने गरेको त्यो बतासझैँ भएर आफूलाई बिर्सिदै आफूहुनुको पनदेखि, चिसो क्षणदेखि म पनि बतासिँदै भाग्न सके ? तर अहँ, म कहिले पनि त्यसरी भाग्न सक्तिनँ । साँच्चै, वास्तविकतादेखि भागेर आजसम्म ख्वै, को कहाँ पुगेका छन् र मैले सक्नु, मैले खोज्नु ? यसरी सम्झिदै जाँदा दुःख लाग्छ । साँच्चै, यो कस्तो वास्वविकता हो मेरो ? अप्रिय पनि कसैको वास्तविकता हुन सक्छ र यसरी ? तर हेर्नोस् न मेरो भने यही नै वास्तविकता भैरहेछ , बनिरहेछ । साँच्चै, अप्रिय भएर पनि मसँगै, मैले सोचेको भन्दा ठीक उल्टो भएर, बलेर खरानी हुन नसकेको अगुल्टोझैँ भएर मभरि-भरि धूवँ लिएर उभिएको छ वास्तविकता ! साँच्चै, यो कस्तो अप्रिय वास्तविकता हो मेरो ? प्रश्नको जवाफ पाउने आशामा कोठामा झुन्ड्याइएको ठूलो ऐनामा प्रतिबिम्बित आफ्नै छायाँलाई हेर्छु । तर सधैँको झैँ आज पनि जवाफ पाउन नसक्ता म यहाँनिर आइपुगेर झन् भासिन्छु , झन् चर्किन्छु । मेरो मानसिकता फेरि पनि बलात्कृत भैदिन्छ । तब लाग्छ, साँच्चै आजभोलि मलाई मेरो आफ्नै छायाँले पनि जिस्क्याइरहेछ , खिज्याइरहेछ । साँच्चै, आफैँलाई आफ्नै छायाँले पनि यसरी जिस्क्याइरहँदा, खिज्याइरहँदा सोच्नुको अर्थ के पो हुन सक्ला र मसँग ? त्यसैले त चेतनामा शून्य हुन खोज्दै आँखा चिम्लिन्छु, चिम्लिरहन्छु ……………………………..
‘केही दिन अघिकी गुलाफ आज थलकमल भैछ्यौ तिमी ! हो, थलकमल ! टाउको दुखाउने बास्ना बोकेको थलकमल ! आजपनि आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो…थलकमलको बास्ना सुँघ्ने मान्छेलाई क्षयरोग हुन सक्छ रे ! त्यसैले थलकमलको बास्ना सुँघेर अब म आफू क्षयरोगग्रस्त हुन चाहन्न । त्यसैले बुझ्यौ केशरी, मलाई भने मेरो जीवनमा केवल गुलाफ, मात्र गुलाफ चाहिन्छ । तर तिमी त थलकमल, मात्र थलकमल ! हो, साँच्चै अब जो मैले चाहेर पनि गुलाफ बन्न सक्तैन यहाँ । त्यसैले केशरी अब म तिमीलाई घुणा गर्छ ………घृणा, मात्र घृणा मेरो मनले, हृदयले उपयुक्त ठानिसकेको छ तिम्रो लागि केशरी !’ झस्कlदै आँखा खोल्छु । कोठामा यतिखेर पनि कोही छैन । म छु र मौनता छ मेरो साथ । कानमा फेरि पनि कमल गुनगुनाउन आइपुग्छ : केशरी, मलाई मेरो जीवनमा गुलाफ मात्र गुलाफ चाहिन्छ तर तिमी त थलकमल, टाउको दुखाउने बास्ना बोकेको थलकमल । हो, आजभन्दा केही महिनाअघि मलाई यसरी नै नङ्ग्याइदिएको थियो कमलले ! हो, यही नै हो मेरो जीवनको वास्तविकता । कमलद्वारा मभरि मेरो विनाइच्छा सिर्जना गरिदिएको एउटा अप्रिय वास्तविकता । अनि साँच्चै म पनि यता केही दिनदेखि यसलाई बिर्सिन खोजिरहेछु । तर यो भने झन्-झन् बिर्सिन नसक्ने गरी झ्याम्मिरहेछ मेरो जीवनमा, मेरो यौवनमा । उफ् ! यो कस्तो कटु सत्य हो मेरो जीवनको, मेरो यौवनको ? साँच्चै कटु भएर पनि मजस्तै कति सत्य छ यो क्षण ? गुलाफ हुनुको अनुभवमा रमाउँदै-रमाउँदै प्रेमको प्रारम्भिक चरणमा नै गुलाफभन्दा थलकमलमा परिवर्तित हुन जानुको आकस्मिकतालाई अब बिर्सिएर बाँच्नु, बाँच्छु भनेर सोच्नु के मेरो मूर्खता होइन र यो ? ऐनाको सामुन्ने उभ्भिएर म कति एक्लै चिच्याइरहुँ यसरी, आफैँलाई आफैँले जवाफ दिन नसक्ने प्रश्नले कति कोपरिरहुँ यसरी ः साँच्चै म के हुँ ? गुलाफ या थलकमल ?? गुलाफै हुँ भने कमलले किन मलाई थलकमल भनेर घृणा गरेको Û फेरि थलकमल नै भैसकेको छु भने मैले म आफैँलाई किन घृणा गर्न नसकिरहेको ? कमलद्वारा घृणा गरिसकेको वास्तविकतालाई किन स्वीकार गर्न नसकिरहेको ?? साँच्चै यो के कटु सत्य होइन त मेरो जीवनको, यौवनको ? साँच्चै कटु भइकन पनि कति सत्य छ यो क्षण ? वास्तवमा म पनि सधैंँ कमलकै भएर बाँच्न, हाँस्न चाहन्थेँ जीवनमा, यौवनमा । साँच्चै म आफूहुनुको हरेक क्षणमा कमल, मात्र कमललाई खोजिरहेकी हुन्थेँ, सोचिरहेकी हुन्थेँ । साँच्चै जब-जब म आफूभित्र कमललाई खोज्न थाल्थेँ, सोच्न थाल्थेँ, तब-तब म आफूसित कमललाई पाउँथेँ, पाइरहन्थेँ । आँखामा खोज्दा आँखामा नै म कमललाई पाउँथेँ । त्यतिखेर बतासले मलाई स्पर्श गर्दा पनि म आफूलाई कमलको अँगालोमा बाँधिएको अनुभव गर्न पुग्थेँ । अनि कमललाई म आफ्नो नजिक पाउँदा लाग्थ्यो, कमल केवल मेरो हो र म बाहेक अब अरु कसैको हुन सक्तैन ! भावुक भएर मैले उसको कपाल सुम्सुम्याउँदा त्यतिखेर कमल पनि आफ्नो हावभावमा यसो भनिरहेको हुन्थ्यो, साँच्चै ऊ पनि अब मलाई मात्र चाहन्छ । पूर्णतः कमल अब मलाई मात्र चाहन्छ आफ्नो जीवनमा, आफ्नो यौवनमा ! अनि म पनि त्यतिखेरका आफ्नो समस्त आकाङ्क्षाहरुमा, आशा र सपनाका सगरहरुमा कमलकै मात्र प्रतिबिम्ब पाउने गर्थेँ । हुन पनि एकान्तको प्राप्त त्यस क्षणमा एक अर्कालाई, एक अर्काको आँखामा पढ्दा, खोज्दा र भेट्दा, शब्दहरुमा कानेखुसी गर्दा, अधरमा स्पर्श गर्दा र मुटुको ढुकढुकीलाई आफ्नो कानले समेट्दा, लाग्थ्यो संसार भन्नु नै म हुँ, कमल हो ! हो, कैयौंचोटि कमलको आँखालाइै पढ्दै, अधरलाई स्पर्श गर्दै मैले मुख खोलेको थिएँ ‘कमल, तिमीले नै भनेको हैन हिजो भन्नु एक सपना हो, जो भुल्दै जानुपर्छ आज भन्नुको अर्थमा प्राप्त विपनामा, अनि भोलि भन्नु मात्र एक कथ्य कल्पना मात्र जो आफूले खोजेजस्तो र आफूले सोचेजस्तो नहुन पनि सक्छ शायद ! त्यसैले हेर त उः त्यहाँ पर वृन्तमा अभयसित झुलिरहेको त्यो रातो गुलाफको कसम ! म तिमीलाई प्रेम गर्छु, कमल म तिमीलाई प्रेम गर्छु, गरिरहन्छु कमल !!’ अनि त्यसबखत मेरो यही अनुहारलाई आफ्नो अँजुलीमा सोहोर्दै कमलले पनि यसो भनेथ्यो मसँग ‘केशरी, साँचो हो, यथार्थ हो, यस संसारमा माया मात्र सदाबहार छ । मायालाई यस संसारबाट रित्याईदिने हो भने यो संसार एउटा ढुङ्गो र माटो बाहेक अरु केही होइन, अरु केही हुनै सक्तैन । र म भन्दछु, माया मात्र सदाबहार छ यो संसारमा । अनि म पनि तिमीले अघिनै भनेजस्तै तिमीलाई माया गर्छु ! तर यो सत्य हो, म भने मेरो मायामा मादकताभन्दा स्निग्धताको आवश्यकता ठान्छु । मादकता माया होइन, हार्दिकता होइन ।’ साँच्चै यतिखेर यी सब सम्झिदा पनि हाँसो उठ्छ, मादकता माया होइन, हार्दिकता होइन ! म मायामा मादकता होइन, स्निग्धता चाहन्छु ! साँच्चै त्यतिखेर मलाई फकाउन, मलाई फसाउन कति असत्य बोलेको रै’छ कमलले ! साँच्चै असत्य भएर पनि कति सत्य ? सत्य भएर पनि कति असत्य ?? साँच्चै मान्छे भन्नुको आधारस्तम्भ नै यही हो….साँच्चै असत्य भइकन पनि कति सत्य ? हो साँच्चै आजको आफूलाई यसरी हेरेर हिजोको आफूलाई हिसाब गर्दै लैजाने हो भने मैले भन्नुपर्छ, कमलद्वारा आफूलाई जोड्न खोजेकी म आफैँलाई , म आफैँद्वारा घटाउँदै लैजाने हो भने मैले भन्नुपर्छ, साँच्चै हिजोको म हुनुको अर्थलाई कमल नाम रहेको एउटा रङ्गीन भ्रमले मात्र रङ्ग्याएकी रहेकी रै’छु मैले ! साँच्चै हिजो केवल एउटा रङ्गीन भ्रम मात्र पो रै’छु म ! वास्तविकताले आफूलाई यसरी क्रमशः नङ्ग्याउँदै जाँदा झन् दुःख लागेर आउँछ । तर अब यसरी दुःख मानेर मात्र के गर्नु, दुःख सम्झेर मात्र के गर्नु ? विगतद्वारा बिग्रेको, बिगारिएको यो वर्तमानलाई अब म आफैँले, आफ्नै बुताले मात्र सपार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । उफ् ! इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि स्वीकार गरी हाल्नुपर्ने यो कस्तो विवशता हो मेरो जीवनको ? आजसम्म ख्वै कसले हालेको छ स्वार्थत्यागको कथा त्यो ?? उफ् ! चलचित्रको प्लटजस्तै कति छोटो यो संसार ? एकैक्षणमा सुख, एकैक्षणमा दुःख ! फेरि पनि मैले बिर्सिन खोजेको वास्तविकता झन्-झन् छरिँदै पो छ मभरि, कोठाभरि । र त म फेरि यसैलाई बिर्सिने नाममा झ्यालतिर लाग्दैछु ।
झ्यालबाट बाहिर आँखा दगुराउँदा परको राममानको घरनिरको डबलीमा राममानको दुई वर्षे छोरोलाई म्वाइँ खाइरहेकी सानुमायालाई देख्छु । सानुमाया …………हिसाब गर्छु । साँच्चै पाएकी भए मेरी दिदी निर्मलाले फटाएको धोतीचोली जत्तिकै धोतीचोली फटाउँदी हो उसले पनि । तर पाइन र पो ! साँच्चै मेरो दिदीकै छोरो पनि डिप्लोमामा पढ्दै छ आज । तर सानुमाया, बिचरी सानुमाया भने डबलीको डबलीमै छे आजभोलि पनि ! साँच्चै, सपना कस्ती देख्दी हो बिचरी ! हो यै प्रश्न अस्ति भर्खरै पनि उसलाई मैले सोधेकी थिएँ । तर त्यतिखेर उसले जवाफ केही दिइन, चुपचाप क्वारक्वारती मतिर मात्र हेरेर बसिरही पो ! उसले साँच्चै आजभोलि बिहानको छाक हामीकहाँ र बेलुकीको छाक राममानकहाँ टार्ने गरेकी छे । सानुमायालाई यसरी पढ्दै जाँदा, यसरी सम्भिmदै जाँदा उसप्रति सहानुभूति राख्न मन लाग्छ । साँच्चै यसपालाको निर्वाचनमा मत खसाल्न मोटर चढाएर लानेहरुको सत्ता प्राप्तिले पनि केही गर्न सकेन सानुमायालाई ! साँच्चै, एउटा स्वरभन्दा बढी अरु केही हुन सकेनन् कोही पनि । मुकुटको मात्र साँटफेर हुँदा यस्तो हुने गर्छ भन्ने पढेको थिएँ मैले । साँच्चै त्यस्तो मात्र भैदियो । बिचरी सानुमाया मत खसालेर आएपछि कति उत्सुक थिई त्यसबखत । मैले त आकर्षक नारा भट्टयाउनेहरुको पछि लागेर मत खसाल्न नजाऊ भनेकै थिएँ । तर मैले भनेको मानिन, मेरो कुरामा विश्वासै गरिन र पो । समयानुसार मुकुट फेर्नेहरुलाई, भाका फेर्नेहरुलाई समयमै नबुझेपछि पछुताउनु मात्र आफ्नो भएर रहिरहन्छ जिन्दगीमा ! हो सानुमायाले पनि आज पछुताऊ मानेकी छे । साँच्चै, आफ्नो भन्ने त्यो डबली बाहेक अरु के नै छ र उसको ? डबली र ऊ । ऊ र डबली । बाँच्नुको एउटा बाध्यता । यसरी सोच्दा सोच्दै म फेरि एकाएक सानुमायालाई नियाल्न पुग्छु । लौ हेर, अझै पनि राममानको छोरोलाई म्वाइँ, मात्र म्वाइँ खानमा नै पो व्यस्त छे बिचरी । लौ राममानको दुलहीले भर्खरै मात्र पो देखिछ कि क्या ! र त हतपत सानुमायाको छातीबाट खोस्तै आफ्नो छातीमा टाँसेर सुम्सुम्याई आफ्नो छोरोलाई । आमाको छातीमा त्यसरी टाँस्सिन पाउँदा पनि किन सानुमायापट्टी नै आफ्नो हात बढाइरहेको होला राममानको छोराले ? लौ, मुख बिगारेर रुन पो थाल्यो । सानुमायाले केही गरिन, केवल थपडी मारी र खित्तखित्त गरी हाँस्दैरही । साँच्चै यतिखेर हाँस्नुभन्दा अरु बढी, थपडी बजाएर खित्तखित्ताउनुभन्दा अरु बढी के नै पो गर्न सक्थी त सानुमाया ?
शायद “उ… उ…. मेरो पोइ !” भन्दै आफ्नो सपनाको पोइलाई खोज्दै दगुरेकी हुनुपर्छ सानुमाया । र त ऊसँगसँगै दगुर्‍यो ऊनिर आइपुगेको ठिटो पनि । साँच्चै पुग्यो पर धेरै प……… र । म चुपचाप आफ्ना एक जोडी आँखाले यी सब दृश्यलाई टिपिरहेछु । लौ, आज पनि सानुमायाले उसको सपनाको पोइलाई भेट्न सकिन, आफूमा समेट्न सकिन । साँच्चै आज पनि घाटामा नै परी सानुमाया ! साँच्चै सानुमायादेखि किन डराएर भागेको होला त्यो ठिटो ? आखिर सानुमाया पनि एउटा आइमाई न हो ! तर ऊ त एउटा लोग्नेमान्छे, देशलाई आवश्यक परेमा, देशको लागि आवश्यक भएमा सङ्गीन समाएर शत्रुसंग धावा बोल्नुपर्ने उमेर बोकेको एउटा लोग्नेमान्छे भएर पनि एउटी आइमाईसंग डराएर भाग्ने नपुंसक काँ को ! छि: छि: यसरी सम्झिदै जाँदा त्यो ठिटोले केही बेरअघि मात्र देखाएको कायरतादेखि मलाई पनि हाँसो उठेर आउँछ । साँच्चै सानुमायाले आखिर उसलाई समातिहालेकी भए पनि के पो नै गर्न सक्थी र ? साँच्चै हेर त एकचोटि पनि फरक्क र्फकेर हेर्ने साहससमेत गरेन त्यो ठिटोले ! शायद सकेन कि ? तर र्फकेर हेरिहालेको भएपनि, जिस्क्याइहालेको भएपनि सानुमायाले के पो गर्न सक्थी र ? छोरीभन्दा आमा तरुनी भनेर राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जिस्क्याइरहने यो देशमा आखिर उत्ताउला भाका नै हालेर सानुमायालाई जिस्क्याइहालेको भएपनि उसले के गर्थी र ? आखिर सानुमाया पनि हिजोसम्म नराम्रोसँग शोषण गरिएकी, आज नराम्रोसँग तर्साइएकी, उपेक्षा गरिएकी एउटी आइमाई न हो ! साँच्चै कृषिप्रधान सरह पुरुषप्रधान यो देशमा आखिर आइमाईहरु जाँतोद्वारा पिस्सिएका, चपाइएका अबलाहरु न हुन् ! हुन पनि पैसा र ताकतको भरमा आइमाईलाई केसम्म गरिएको र भनिएको छैन र यहाँ ? यसरी सम्झिदै जाने हो भने लोग्नेमान्छेको अनुहार देख्दैमा उसप्रति घृणा लाग्नुपर्ने हो ! हुन पनि लोग्नेमान्छेलाई सहिष्णु हुनु भनी उसकी आमाले सिकाउँछे, सघाउँछे । आमाकै स्नेहमा हुर्किदै जब ऊ एक्लै उभ्भिन सक्ने
हुन्छ, तब ऊ आइमाईलाई एउटा वासनाको पुत्ला बनाएर आफूखुसी गर्न चाहन्छ, फसाउन चाहन्छ । यसरी सम्झिदै जाँदा झ्यालमा बसिरहन पनि मन मरेर आउँछ मलाई । तब म फेरि एकपटक झ्याललाई ढ्याप्प ढप्काउँदै ओछ्यानतिर लम्किन्छु । मानौँ अब उत्सुकतापूर्वक मैले प्रतिदिन खोल्ने गरेको त्यो झ्यालबाट पनि कुनै दृश्य नै देख्न सक्तिनँ म । हो, वास्तवमा हुन पनि आजभोलि त्यो झ्यालबाट अब म केही देख्न सक्तिनँ । साँच्चै मुर्कट्टाहरुलाई मान्छे भनेर कतिन्जेल यसरी हेर्नु, हेरिरहनु ? साँच्चै भोलि नै भ्याएँ भने एउटा पर्दा सिएर हालिदिन्छु । अनि त त्यो झ्यालमा केही छ भनेर सोच्नु पनि सिर्फ पर्दा मात्र देख्ने छु र यसै गरी हरेक दिन त्यो झ्यालमा पर्दा, मात्र पर्दा देख्दा सबका धोखा खाएका आँखाहरु पनि तर्सेर किनारा लाग्नेछन् । तर त्यो पर्दा सारेर फेरि एकपटक मलाई हेर्ने साहस, मलाई बुझ्ने साहस कसैमा हुने छैन । कोठामा अँध्यारो बढ्दै गएकोले नजिकैको वेडस्विच थिच्छु कोठा अघिको भन्दा केहि उज्यालिन्छ । टीभी खोल्छु । फेरि एकपटक छर्केको अत्तरझै उही पुराना अनुहारहरु आएर मलाई कोर्पन थाल्छन् । साँच्चै फेरि यसपटक पनि धनको उन्मादमा बौद्धिकतालाई किन्छु भनेर भेला भैरहेका उही निर्लज्ज अनुहारलाई टीभीको पर्दामा देख्नुपर्दा झन् उराठ लाग्छ र टीभी बन्द गर्दै ओछ्यानमा आएर पल्टिन्छु । आँखा चिम्लिदै केही सोच्दै म आफैँलाई पनि बिर्सिने बहानामा रुमल्लिन पुग्छु । साँच्चै के आइमाई भनेका रुप मात्र हुन् र ? यौवन र बैँसबाहेक आइमाईमा अरु केही छैन ? साँच्चै प्रेम भनेको के वासनाको पर्खाइ मात्र हो ? प्रेम गर्नुको क्रममा हालिएका बाचाहरु के क्यालेण्डरका मौन छाँयाँ मात्र हुन् ? हैन, यो प्रश्नको जवाफ मैले कसबाट कैल्हे कसरी र कहाँ पाउने ? समयसित सोधेर जवाफ लिऊँ भने पनि लाटो र लङ्गडो छ यो समय ! साँच्चै मेरो भानिजदाइको छोरो सुन्दरजस्तै लाटो र लङ्गडो छ यो समय ! यहाँनिर आएर पनि टुट्टा खान्छु म । समाल्न खोज्दाखोज्दै पनि आँखा एकाएक पग्लन थाल्छ । म आफ्नै आँसुमा बग्न थाल्छु-बरबरी ।
‘केशरी, आज तँ एक्लै ?’ मेरो कोठाको ढोकैबाट प्रश्न बग्छ म भएतिर ।
‘जोडी पाउनु त समय र संयोगको कुरा न हो !’ सरलातिर एउटा नमीठो हाँसो पोख्तै म भन्छु ।
‘हेर न मलाई खिस्याएकी !’
‘त्यो त तेरै सोचाइको गल्ती हो सरला !’
‘भो ! भो ! छोड्दे यो कुरा, बरु हिँड्न आज न्यूरोडतिर जाऔँ न अलिकति मेरो बजार पनि गर्नुथ्यो ।’ आफ्नै सुरमा भन्दै गई सरलाले ।
सरलाको कुरा सुन्दा एसिडले रङ्ग बदलाइदिएको लिटमसपेपरझैँ भैदिन्छ मेरो अनुहार । जिस्क्याउन थाल्छ मलाई नै फेरि पनि यो क्षण । सोच्छु, साँच्चै अब मेरो लागि न्यूरोड भन्ने शब्द नै नपच्ने भैसकेको छ । अब पनि न्यूरोड जानु त आलोघाउमा नुनचुक छर्नु र आफैँले आफैँलाई उपहास गरिरहेका जीवनीहरुलाई हेरिरहनु सिवाय अरु केही हुन सक्तैन मेरो लागि ! फेरि कमल मजस्तै थलकमल हुनुभन्दा अगाडिका कुनै सौम्य र रम्य गुलाफसँग भेटियो वा देखियो भने ?….. मस्तिष्कले भरखरै जोडेको पछिल्लो यस हिसाबदेखि झन् दुःख, डर लागेर आउँछ र हतार-हतारमा भन्छु ‘सरला आज मलाई अलि सन्चो पनि छैन्, त्यसैले म जान्न नरिसा ल ?’
‘हामी कमल होइनौँ, अनि किन जान्थिस् त हामीसँग ?’
‘सरला, कमलको कुरा नगर !’ नचाहँदानचाहँदै पनि त्यसै-त्यसै आवेगमा आएर चिप्लिन्छन् यिनै शब्दहरु ।
‘मैले केही पनि बुझ्न सकिन नि केशरी !’
‘हो आज यही त भैदिएको छ हामीमा । कारण हामी आफैँलाई बुझ्नसक्ने हामी पनि छैनैा नि सरला ! र त आज….’
सरलाले केही बोली न । शायद चाहिन कि ! एकाएक वातावरणमा फेरि मौनता । एक अर्कासँग एक अर्काको अनौठो साक्षात्कार । यती मात्रै हैन, बलात्कार पनि ! तब फेरि केही सोचिरहनुको अर्थ पनि हुँदैन मसगँ । शायद सरलासँग पनि । फलस्वरुप ऊ र म एक अर्कालाई आ-आफ्नै पाराले हेर्छौँ, हेरिरहन्छौँ मात्र । मानौँ केही क्षण अघिनै पहिरो गैसकेको छ हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो वर्तमानमा, गुलाफमा, थलकमलमा र अनि पत्थरमा खनाइएका अत्तरका सुवासहरुमा……
विवेक सिर्जनशील प्रकाशन प्रा.लिबाट २०६९ मा प्रकाशित कथाकार अतृप्त पाण्डेयको ‘हुरी नचलेको भए……’ कथा सङ्ग्रहबाट साभार गरिएको शीर्षस्थ कथा ।
One Comment on “सोचाइमा पहिरो जान्छ”
deepak raj khanal wrote on2March, 2013, 8:46
marmik r sandar lekhi cha